IMPINDEZELO KARUSSEL CROWE YEMPINDEZELO 'ENGAHANJISWANGA' INEGAZI KWAYE IYATHANDEKA - IINDABA
Impindezelo kaRussel Crowe yempindezelo 'engahanjiswanga' inegazi kwaye iyathandeka
Abadlali, ndikuthengele i-monologue yophicotho-zincwadi!
Masilungiselele imeko: Ihlabathi liyabhabha, kukho ubundlobongela phakathi kwezitrato kwaye uyisaluni yesikhohlela okhokele ubomi obungenantsingiselo. Ke kwikamva, uzisombulule, ndiyeke, kwaye ndiqhubeke nokuhlasela kwegazi edolophini. Ndiyifumene? Nazi iintlobo zakho.
Yonke imizamo, idini ngalinye endakha ndalwenza kubomi bam obungabonakaliyo, ligxothiwe kwaye lagwetywa kwaye alihoywa. Ndiye ndahlafunwa, ndasetyenziswa ndaye ndagxuza amathe. Ke ndiziva, f - - kin 'Fred, ndiza kwenza igalelo lam ngale ndlela: ngogonyamelo kunye nembuyekezo. ‘Kuba yile nto ndiyithengileyo ishiyekileyo.
Le ntetho yejusi yentetho-evuza kakhulu idrama kangangokuba noShonda Rhimes akakwazanga ukuyiphupha -yithethwa nguRussell Crowe ngaphakathi kwempambano entsha yokuziphindezela engathandekiyo. Kwaye, nkwenkwe, nguye!
Kwangoko ngaphakathi kwebhanyabhanya, uRachel (Caren Pistorius), onentsasa eyoyikisayo, wenza impazamo ngelishwa lokusika isimilo sikaCrowe, ekubhekiswa kuye njengeNdoda, kwiindwendwe.
Yiyo indawo esikuyo kweli hlabathi kule mihla, iintetho ezigcwele umsindo xa umqhubi. Kubonakala ngathi sivelise ukungabinamandla okucela uxolo nakubani na. Emva koko igeza elihlanyayo liyambamba, liba iselfowuni, lilandele amalungu osapho lwayo kwaye liwaphumeze. Ukuxhonywa, ukutshiswa: Kukutya okukhohlakeleyo. Eyona njongo kaRachel kukugcina unyana wakhe omncinci, uKyle.
URussell Crowe uya kukhutshelwa ngaphandle kwindawo evela kwi-Unhinged.I-Solstice Studios kunye neMedia Ingenious ngendlela ye-AP
UCrowe, ongabhekiswa ngokuchanekileyo njenge-pacifist, yindoda efanelekileyo yokudlala iNdoda. Nokuba uneminyaka engama-56, le ndoda ibonakala ngathi ingathumela nabani na ukubaleka kwi-ER, kwaye njengomdlali weqonga akaze afikelele kumsindo okanye atyhalele ekubeni azibuyise. Ukusebenza kwakhe ngokungaziwayo, i-psychopath enxaniweyo yegazi iza inyulu ephazamisayo.
Njengoko isitayile esoyikisayo, mva nje, sikhule ngobuqili ngakumbi kwaye sikrelekrele, uphakamisa ukuncwina koncedo lokunikwa into evuyisayo esisimumu. Ukusweleka okumnandi kulungile kwaye kuyonwabisa kwaye kukho inani lothuka elizinzileyo kumdlalo bhanyabhanya kamlawuli uDerrick Borte. Kodwa jonga kwenye indawo ngengqondo ye-psychoanalysis okanye ingxoxo yezopolitiko enomoya. Kwaye ngelixesha, ndiyakunika, into elityelweyo ngumntu-eluntwini ichukumisa uWilly Loman, yongeza njengokuFa koMthengisi we-2: Ingqwalaselo kufuneka ibulawe.
Izigaba: Iwiki Hulu Umqala
UJonathan Wright kunye no-marie
Uluann de lesseps tom
USteve horstmeyer utshatile
indlela yokubukela umtsalane ookumkani besixeko
nicole ovela kumceli mngeni